I-27 YEENDAWO EZIFUTSHANE EZIPHOLILEYO ZAMADODA EZININZI (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Amacala amafutshane angama-27 aPhezulu aPhezulu okucheba iinwele
Eyona Iinwele Zamadoda Amacala amafutshane angama-27 aPhezulu aPhezulu okucheba iinwele
Imfutshane emacaleni, inde kunwele ephezulu kuye kwaba yiyo yonke into ethandwayo kwizinwele zamadoda mva nje. Kuba iinwele ezinde phezulu nezinwele ezimfutshane emacaleni…
Imfutshane emacaleni, inde kunwele ephezulu kuye kwaba yiyo yonke into ethandwayo kwizinwele zamadoda mva nje. Ngenxa yokuba iinwele ezinde ngaphezulu kunye nezinwele ezimfutshane emacaleni sisiseko seenwele ezininzi ezithandwayo zamadoda, inani lokusikwa kunye nezimbo onokukhetha kuzo azinasiphelo. Umzekelo, abafana banokufumana i- ukubuna okanye ngaphantsi emacaleni, ngelixa ushiya iinwele ixesha elide ngaphezulu ukuze ubambe isitayile, ipompadour, ndibuyele emva , dibanisa, icala icala , umphetho okanye naluphi na uhlobo lwenwele ebunjiweyo.
Ukuba ufuna amacala amafutshane iinwele ezinde eziphezulu, jonga ezona ndlela zilungileyo zokucheba iinwele zamadoda ukuze ufumane ngoku! Siqinisekile ukuba iinwele eziphakathi ukuya ezinde ezinamacala amafutshane ziya kukunika iifashoni, izitayile ezithandekayo ozifunayo!
1Amacwecwe amafutshane aBalaseleyo aMde eziPhezulu zeenwele
MbiniUlusu olusezantsi luphela kunye neFaux Hawk
3Ukuphela okuphezulu kwePompadour
4Ukuphela okuphezulu kunye neenwele eziManzi eziMthubiweyo
5UkuPhakathi okuPhakathi ngeBrashi eMiselweyo
6Utyikitye umva Undercut
7Isityalo esinombala kunye neWavy Fringe
8Ukuphela kweTaper Taper kunye neenwele zeSpiky
9Ulusu oluphakathi phakathi luyaphela kunye neComb Over
10Ukuphela okuphezulu kweBald kunye neCandelo kunye neQuiff
Shumi elinanyeUkuphela kweTaper ephantsi kunye nomphetho osikiweyo
12Phakathi kweBald Fade kunye neHard Part Comb Comb Over
13Iinwele eziMthubi eziMthubi kunye noLusu oluPhezulu oluPheleyo kunye noMgca oPhezulu
14Iphele ngeenwele ezinde phezulu
Shumi elinantlanuUlusu olusezantsi luphela ngeenwele kunye neendevu
16Izinwele eziKhuselweyo eziMhlana kunye nokuQhawulwa koQhagamshelo
17Isikhumba siphela ngaphantsi kweComb Over
18Amacandelo amafutshane aPheleyo aBala ngaPhambili ngeNwele eziPhakathi
19IPompadour yanamhlanje ngeFade ePhakamileyo
Amashumi amabiniUkuphela kwesantya esiphezulu ngePompadour kunye noYilo
amashumi amabini ananyeUkuphela kweBald ephezulu kunye neenwele eziQhelekileyo zeNdalo
22Amacandelo amafutshane kunye ne-Messy Medium Izinwele eziPhezulu
2. 3I-Messy Quiff kunye ne-Tapered Sides kunye neendevu
24Ukuhla kweLow Fade kunye neCandelo eliLukhuni kunye neendevu
25Mfutshane ngeSpiky Hair Fade
26I-Undercut Fade eneenwele ezomileyo
27Molo lo Fade kunye noThotho lweBrashi phezulu
Amacwecwe amafutshane aBalaseleyo aMde eziPhezulu zeenwele
Nanga awona macala amafutshane afanelekileyo kwizinwele eziphezulu zabafana. Nokuba uneenwele ezithe tye, ezirhangqileyo, ezigobileyo okanye ezingqindilili, ezi zitayile zangoku zokucheba iinwele ziya kuthi ujonge isitayile kuwo nawuphi na umsitho!
Ulusu olusezantsi luphela kunye neFaux Hawk
I-faux hawk ngokuqinisekileyo yenye yeendlela ezipholileyo zeenwele kule minyaka idlulileyo. Eyona nto intle malunga ne-fohawk kukuba inokuba nesitayile ngayo nayiphi na iinwele okoko iinwele ezingaphezulu zide ngokwaneleyo ukuba zitshise.
Ukuphela okuphezulu kwePompadour
I-pompadour yanamhlanje yimbonakalo eshushu esekwe kwisitayile esidala. Ubukhazikhazi obude okanye obufutshane busebenza kakuhle ngamacala amafutshane, njengokuphela okanye ukungaphantsi.
Ukuphela okuphezulu kunye neenwele eziManzi eziMthubiweyo
Ngokungafaniyo ne-gelled spikes ye-90's, iinwele zanamhlanje ze-spiky zihlala zenziwe ngombala kwaye zikhululekile, zibanike inkangeleko yendalo kunye nefashoni.
UkuPhakathi okuPhakathi ngeBrashi eMiselweyo
Kuyafana nokubuyela umva, iinwele ezibrashiweyo zangasemva zihlala zibhaliwe kwaye ke zibonelela ngevolumu engaphezulu. Isikhumba esicocekileyo esiphakathi emacaleni kukuchukumisa okuhle okuqaqambisa ngakumbi iinwele ezishinyeneyo ngaphezulu.
Utyikitye umva Undercut
Isinwele esingaphantsi somqolo ongaphantsi ngumzekelo ogqibeleleyo wesitayile se-retro esibuyisiweyo. Inkangeleko ephezulu yokwahlulwa kweenwele ezinamafu, nezinwele ezinde ngaphezulu zenza ukusika okupholileyo kunye nesitayile kuye nawuphi na umntu.
Isityalo esinombala kunye neWavy Fringe
Abafana abaneenwele ezijijekileyo okanye ezigobileyo bahlala becinga ukuba akukho zinwele zilungileyo abanokuzifumana. Ngokuchasene noko, esi sityalo senziwe ngombala sijongeka ngcono ngenxa yomjelo we wavy.
Ukuphela kweTaper Taper kunye neenwele zeSpiky
Phantse naluphi na uhlobo lokucheba iinwele okanye lokucheba lisebenza kakuhle ngeenwele ezicocekileyo. Uncedo lweenwele ezinde ngaphezulu kukuba abafana banokwenza isimbo esikhangeleka ngenye imini, ikama ebunjiweyo ngaphezulu kolandelayo, kwaye bakhethe ukubrasha umva kwenye.
Ulusu oluphakathi phakathi luyaphela kunye neComb Over
Ukuhombisa ikama ngaphezulu njengokupholile ngolu hlobo, ngokuqinisekileyo abafana baya kufuna ipomade esemgangathweni. Kwaye ulusu luphela emacaleni yenye yeendlela onokwenza ngayo ukuba usikwe ngokukhethekileyo.
Ukuphela okuphezulu kweBald kunye neCandelo kunye neQuiff
Oku kunqunyulwa kwe-bald fade kwenziwa ngobungcali. Yongeza kwinxalenye yoyilo lweenwele kunye nezinto eziphambili, kwaye le quiff inikezela ngenkangeleko entle.
Ukuphela kweTaper ephantsi kunye nomphetho osikiweyo
Ukudityaniswa okuphantsi kunye nentshebe kulo mfanekiso ujongeka umhle. Ukuba ukhangele i-hairstyle elula engadingi isitayela esininzi, i-curly fringe okanye isityalo saseFransi yindlela efanelekileyo.
Phakathi kweBald Fade kunye neHard Part Comb Comb Over
Isitayile esingaqhelekanga, ikama ngaphezulu okanye icala lecala kunokuba kulunge ukuzama. Ukuphela kolusu oluphakathi kudibanisa ukujonga okwangoku kunye neenwele ze-retro ngaphezulu.
Iinwele eziMthubi eziMthubi kunye noLusu oluPhezulu oluPheleyo kunye noMgca oPhezulu
Izinwele ezithunyelweyo zihlala zilolungiso olusezantsi lwabafana. Isibonelelo kukuba unokukwenza isitayile oku kunqunyulwe kwi-fringe, ukubuyela umva, okanye ikama ye-wavy ngaphezulu.
iinwele ezintle zabantwana
Iphele ngeenwele ezinde phezulu
Ulusu olusezantsi luphela ngeenwele kunye neendevu
Isilevu esityebileyo, esigcweleyo senza ukongeza okuhle nakweyiphi na into yokucheba kwamadoda. Ukuba uneenwele ezininzi zobuso, cinga ukuphela kwentshebe.
Izinwele eziKhuselweyo eziMhlana kunye nokuQhawulwa koQhagamshelo
Isikhumba siphela ngaphantsi kweComb Over
Amacandelo amafutshane aPheleyo aBala ngaPhambili ngeNwele eziPhakathi
IPompadour yanamhlanje ngeFade ePhakamileyo
Ukuphela kwesantya esiphezulu ngePompadour kunye noYilo
Ukuphela kweBald ephezulu kunye neenwele eziQhelekileyo zeNdalo
Amacandelo amafutshane kunye ne-Messy Medium Izinwele eziPhezulu
I-Messy Quiff kunye ne-Tapered Sides kunye neendevu
Ukuhla kweLow Fade kunye neCandelo eliLukhuni kunye neendevu
Mfutshane ngeSpiky Hair Fade
I-Undercut Fade eneenwele ezomileyo
Molo lo Fade kunye noThotho lweBrashi phezulu
I-125 Eyona Tattoos yoKhakhayi yamadoda
I-35 Intombazana encinci enwele iinwele
Eyona Pomades ilungileyo yeenwele zaseAsia
yintoni uphawu lwam lwelanga
imifanekiso yeenwele ezincinci zenkwenkwe
uphawu lenkwenkwezi ekhulayo
iinwele zomntwana omncinci
iimveliso zeendevu kumadoda amnyama